HP က SCANJET 2400 စကင်နာများအတွက်ယာဉ်မောင်း DOWNLOAD - မောင်းသူ - 2019
အဆိုပါ HP က Scanjet 2400 စကင်နာများအတွက်ယာဉ်မောင်း Download လုပ်ပြီး install
သငျသညျဖြစ်ကောင်း, iTunes Store ကသိကြသည့်အတိုင်း - မီဒီယာအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုယူပြီးသော Apple ကတစ်ဦးအွန်လိုင်းစတိုး: ဂီတ, ရုပ်ရှင်, ဂိမ်းများ, apps များ, စာအုပ်များ, စတာတွေအများအပြားကအသုံးပြုသူများကို iTunes Store မှာပရိုဂရမ်မှတဆင့်ဒီ store မှာစျေးဝယ်ထွက်သယ် .. iTunes ကိုလုပ်ပြီး iTunes Store မှမချိတ်ဆက်နိုင်လျှင်သို့သော် built-store ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အလိုဆန္ဒအမြဲအောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
အဆိုပါ iTunes Store ကအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖြစ်ပွားနိုင်သည် access ကိုငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့သည်သင်တို့စတိုးဆိုင်မှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုမြဲမြံစေနိုင်ပါလိမ့်မည် သိ. အပေါငျးတို့သအကြောင်းပြချက်အဘယ်ကြောင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်ကြောင့် iTunes ကိုလုပ်ပြီး iTunes Store မှမချိတ်ဆက်နိုင်မည်နည်း
အကြောင်းမရှိ 1: အဘယ်သူမျှမအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု
အများဆုံး banal ပေမယ့် iTunes Store ကမှချိတ်ဆက်မှုမရှိခြင်းများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအကြောင်းပြချက်နှင့်အတူစတင်ဖွင့်ကြပါစို့။
အကြောင်းပြချက် 2: iTunes ကို၏ဗားရှင်းဟောင်း
iTunes ကို၏ဗားရှင်းအဟောင်းထိုကဲ့သို့သောစတိုးဆိုင် iTunes Store ကမှချိတ်ဆက်မှုမရှိခြင်းအဖြစ်ပြဿနာများ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးပြသ, သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံး - iTunes ကိုအပေါ် updates များကိုစစ်ဆေးသည်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်၏ updated version ကိုသငျသညျ download ပြုလုပ်မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်ဆိုပါက install လုပ်ရန်သေချာစေပါဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: iTunes ကိုအပေါ် updates များကိုစစ်ဆေးသည်နည်း
အကြောင်းပြချက် 3: iTunes ကိုဖြစ်စဉ်များ Antivirus ကိုသော့ခတ်
နောက်တစ်ခုပြဿနာတစ်ခု၏ကျော်ကြားမှုအပေါ် - အချို့ iTunes ကို Antivirus ကိုဖြစ်စဉ်များပိတ်ဆို့ခြင်းသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်စေခြင်းငှါ, သင်တို့မူကားတစ်ဦးစတိုးဆိုင် iTunes Store ကဖွင့်လှစ်ရန်ကြိုးစားသောအခါ, သင်ကပျက်ကွက်ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျ Anti-virus ကိုအလုပ် disable ဖို့ကြိုးစား, ပြီးတော့ iTunes Store က၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုစမ်းသပ်သင့်ပါတယ်။ စတိုးဆိုင်ပြီးနောက်အောင်မြင်စွာကဤလုပ်ရပ်များ loaded ခံခဲ့ရပါလျှင်, သင် Anti-virus ကိုဆက်တင်များသို့သွားနဲ့ iTunes မှခြွင်းချက်များ၏စာရင်းထည့်သွင်းနှင့်ကွန်ယက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ကို disable လုပ်ဖို့ကြိုးစားကြဖို့ကြိုးစားရန်လိုအပ်ပါသည်။
အကြောင်းပြချက် 4: အဆိုပါပြုပြင်ထားသော hosts file ကို
ပထမဦးစွာငါတို့သည်သင်တို့၏ antivirus ကိုအတူနက်ရှိုင်းသော system scan ကရှိသည်။ ဒါ့အပြင်တူညီတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဘို့, သင်ကခြိမ်းခြောက်မှုကိုရှာဖွေ, ဒါပေမယ့်လည်းလုံခြုံစိတ်ချစွာသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်မည်မဟုတ်သာသောအခမဲ့ utility ကို Dr.Web CureIt ကိုသုံးနိုင်သည်။
ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ဖို့လိုအပ်ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးပြီးစီးပြီးနောက်။ အခုဆိုရင်သင် status ကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါတယ် ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ဖိုင် နှင့်လိုအပ်ချက်များကိုပါလျှင်သာမန်သူတို့ကိုပြန်သွားရလိမ့်မည်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် link ကိုခြယ်ပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက်ဒီလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်သည်။
အကြောင်းပြချက် 5: အဆိုပါ Windows Update ကို
Apple ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဆိုအရ unpatched ကို Windows ကိုလည်း iTunes Store ကချိတ်ဆက်ရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
Windows 10 ကိုထိုသို့သောဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုထုတ်ပယ်ဖို့, သင်က window ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် "န့်သတ်ချက်များ" ကီးဘုတ် shortcut ကို ဦးဝင်း + I ကိုထို့နောက်အပိုင်းကိုသွား "အပ်ဒိတ်လုပ်နေသည်နှင့်လုံခြုံရေး".
အသစ်ကပြတင်းပေါက်မှာ button ကို click "အပ်ဒိတ်များအဘို့ Check"။ သငျသညျကိုတှေ့ရလိမျ့မညျနောက်ဆုံးသတင်းများအဘို့အလိုလျှင်, သူတို့ကိုထည့်သွင်းပါ။
တူညီတဲ့ Windows ကိုငယ်ဗားရှင်းများအတွက်တတ်၏။ မီနူးကိုဖွင့် "Control Panel ထဲက" - "Windows ကို Control Center ကို"နောက်ဆုံးသတင်းများအဘို့အ Check နှင့်ခြွင်းချက်မရှိဘဲအားလုံးနောက်ဆုံးသတင်းများ၏ installation လိုက်နာပါ။
အကြောင်းပြချက် 6: Apple ကဆာဗာများနှင့်အတူအဆိုပါပြဿနာ
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်ပိုမိုဘာမျှဆက်လက်တည်ရှိပေမယ့်စောင့်ဆိုင်းမည်မဟုတ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပြဿနာဖြစ်ကောင်း, မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မည် - နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်။ ဒါပေမယ့်စည်းကမ်းအဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများမျှမျှတတအလျင်အမြန်ဖြေရှင်းနေကြသည်။
ဤဆောင်းပါးတွင်တှငျကြှနျုပျတို့ကိုသင် iTunes Store ကမချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်အဓိကအကြောင်းရင်းများပြန်လည်သုံးသပ်။ မျှော်လင့်, ဒီဆောင်းပါးကိုသင်အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့သည်။
အဆိုပါ SSD ကို install လုပ်နည်း
အဆိုပါ VC ကိုကနေဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲဘို့အစီအစဉ်ကို
Windows 10 ကိုအပေါ် user name ကိုလေ့လာပါ
Connectify လျှောက်လွှာ Analogues
Adobe Premiere Pro ကို
IOS နှင့် MacOS
မကြာခဏအသုံးပြုသူများသင့် hard disk ပေါ်မှာနည်းနည်းအာကာသကိုတက်ယူမယ်လို့နှင့်စနစ်တင်ပို့မယ့်စွယ်စုံပုံရိပ်ကိုကြည့်ရှုသူရှိသည်ဖို့ချင်တယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲအများကြီးချိန်မှအဆင့်မြင့်စွမ်းရည်များကိုအများဆုံး application များ။ ဒါပေမယ့်နိမ့်အလေးချိန်မှာပြဿနာများ၏အတော်လေးနည်းနည်းဖြေရှင်းပေးသောဓာတ်ပုံများ, အတူလုပ်ကိုင်မှုအတွက်အစီအစဉ်များလည်းရှိပါတယ်။ ဆက်ဖတ်ရန်
Antivirus ကို, browser ကို, အသံ, ဗီဒီယိုကစားသမား: အားနည်းကွန်ပျူတာတွေအတွက် Programs ကို
https://termotools.com my.termotools.com © မောင်းသူ 2019